राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसायीलाई डण्डा लगाउँदैनौँ: अर्थमन्त्री खतिवडा
कर्पोरेट नेपाल , १२ माघ २०७६, आईतवार, १२:०२ pm
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसायीलाई डण्डा नलगाउने बताएका छन् । ६८औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार भन्सार विभागले गरेको कार्यक्रममा खतिवडाले जथाभावी दुःख दिएर लक्ष्य पूरा गर्ने योजना सरकारको नभएकाले जिकिर गरे ।
उनले आय भएको ठाउँमा मात्रै राजस्व उठाउने र व्यवसायीलाई नावश्यक दुःख दिएर लक्ष्य पूरा गर्ने योजना नभएको दावी गर्दै भने, ‘राजस्व घट्दा पनि चिन्ता नगर्ने मन्त्री पाउनु भएको छ, खुसी हुनुस् । भन्सार राजस्व कम भएर केही हुन्न आन्तरिक राजस्व राम्रो छ । अन्तःशुल्क, भ्याट र आयकरको संकलन राम्रो छ ।’
खतिवडाले भन्सारको सन्दर्भमा महशुल अहिले नै घटाउन नसकिने बताए । त्यसका लागि पहिले व्यवसायीले विकृति हटाउने र सामानको गुणस्तरमा ध्यान दिन सल्लाह दिए । उनले विकृति हटेपछि मूल्य घटाउने बताउँदै आगामी दुई वर्षभित्र भन्सार प्रणालीलाई कागजविहीन (डिजिटल) बनाइने बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारलाई थप पारदर्शी बनाउन प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरिने बताए । भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण गर्न त्यससम्बन्धी नीति, कानुन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बडाइएको जानकारी दिँदै उनले व्यापार सहजीकरणमा खास नीतिको सरलीकरण, एकीकरण र व्यापार प्रक्रियामा सुधार भइरहेको बताए ।
हरेक बर्ष जनवरी २६ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मनाउने गरिन्छ । व्यापार सहजीकरणका लागि भारत, चीन र बंगलादेशसँग फरक फरक द्धिपक्षीय संयन्त्रहरु क्रियाशील छन् । यस्ता संयन्त्रले सीमावर्ती भन्सारमा नीतिगत एकरुपता सहजीकरण, सूचना आदानप्रदान र समन्वयको काम गरिरहेका विभागको भनाई छ ।
चीनसँग भन्सार सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने भारतसँग यस्तो सम्झौता हुने प्रक्रियामा छ । भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा भन्सार व्यापार सहजीकरण समिति केन्द्रमा क्रियाशील रहेको छ । निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ ।
पाँचौँ चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवं कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ । भन्सार विन्दुमा करिब ४२ प्रतिशत हरियो र पहेँलो मार्गबाट र बाँकी ५८ प्रतिशत रातो मार्गबाट जाँचपास भएको छ ।
रातो मार्ग भौतिक परीक्षण हुने जाँच प्रणाली हो । पूर्वाधार विकास निर्माण र सुधारमा भन्सार क्रियाशील रहेको र विभागले कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यस्तै विभागले प्रत्यक्ष राजश्व संकलन ड्यासबोर्ड पनि कार्यनयनमा ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा भनेः भन्सार प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध
विमानस्थल भन्सारमा अर्थमन्त्रीको छड्के, राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन निर्देशन
एनआईसी एशियाको काउण्टर स्थापना कञ्चनपुरको भन्सार कार्यालयमा गर्ने
भन्सार छली गर्ने विरुद्ध मुद्दा
अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र वितरणलाई चुस्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न परिसंघको सकृयता, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीपीई हस्तान्तरण
कोरोना संक्रमणः इटालीमा मृत्युदर घटेन, अमेरिका अर्को इपिसेन्टर बन्ने डब्लूएचओको चेतावनी
कोरोना प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के खाने के नखाने ?
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि एनसेलले दियो रु. १० करोड